Nhau - Panoshandiswa maValves
PPR mavharuvhu uye fittings
CPVC mavharuvhu uye fittings
HDPE pombi uye fittings
PP compression mavharuvhu uye fittings
Iko Iko Mavheji Anoshandiswa: Kwese Kwese!
08 Nov 2017 Yakanyorwa naGreg Johnson
Mavharuvhu anogona kuwanikwa chero kwanhasi chero chipi zvacho: mudzimba medu, pasi pemugwagwa, muzvivakwa zvekutengesa uye muzviuru yenzvimbo dziri mukati memagetsi nemiti yemvura, zvigayo zvemapepa, zvigadziridzo, zvinomera zvemakemikari uye zvimwe zvivakwa zveindasitiri nezvivakwa.
Iyo indasitiri yevhavha iri yakazara-mapfudzi, aine zvikamu zvichisiyana kubva pakugoverwa kwemvura kuenda kune simba renyukireya kusvika kumusoro uye kuzasi kwemafuta uye gasi. Imwe yeaya ekupedzisira-mushandisi maindasitiri anoshandisa mamwe akakosha marudzi emavhavha; zvisinei, ruzivo rwekuvaka uye zvekushandisa zvinowanzove zvakasiyana zvakanyanya. Heano sampling:
Munyika yekuparadzirwa kwemvura, kumanikidza kwacho kunowanzo kuve kwakadzikira uye tembiricha yakatarisana. Aya mairi maviri ekushandisa chokwadi anotendera akati wandei vharuvhu dhizaini zvinhu izvo zvaisazowanikwa pane zvimwe zvakaomeswa michina senge yakakwira- tembiricha yemhepo mavhavha. Iyo tembiricha iri mukati mebasa remvura inobvumidza kushandiswa kwema elastomers uye zvisimbiso zverabha zvisina kukodzera kumwe kunhu. Zvinhu zvakapfava izvi zvinobvumira mavhavha emvura kuve akashongedzerwa kuti asimbise madrip.
Kumwe kufunga mumagetsi emasevhisi emvura sarudzo mune zvekuvaka. Simbi uye ductile simbi zvinoshandiswa zvakanyanya mumasisitimu emvura, kunyanya makuru ekunze dhayamita mitsara. Mitsara midiki kwazvo inogona kubatwa mushe nemidziyo yebronze vharuvhu.
Iko kumanikidza kunoonekwa nemazhinji mavhavhari emvura anowanzo kuve ari pasi pe200 psi. Izvi zvinoreva kuti mukobvu wakakomberedzwa-ekumanikidza dhizaini haudiwe. Izvo zvataurwa, pane zviitiko apo mavhavha emvura akavakirwa kubata kumanikidza kwakakwira, kusvika kunosvika mazana matatu psi. Aya mafomu anowanzo kuve pane magera marefu padyo padanho rekumanikidza. Dzimwe nguva mavhavha emvura akakwira-anodzvinyirirwa anowanikwawo pakakwirira-kumanikidza nzvimbo mune dhamu refu.
IAmerican Water Works Association (AWWA) yakaburitsa maratidziro anofukidza akawanda akasiyana mavhavha uye maactuator anoshandiswa mumashandiro emvura.
Rutivi rwakapetwa rwemvura inonwiwa inonaya inoenda kunzvimbo kana dhizaini ndiyo mvura yakasviba kana kubuda kwetsvina. Iyi mitsara inounganidza ese marara emvura uye zvisimba uye anovaendesa kunzvimbo yekuchenesa tsvina. Aya marapirwo ekurapa ane yakawanda yakaderera pombi yekumanikidza uye mavhavha ekuita yavo "yakasviba basa". Izvo zvinodikanwa zvemavheji emvura yakasviba mune dzakawanda kesi zvinorerutsa zvakanyanya kupfuura izvo zvinodikanwa zvebasa rakachena remvura. Iron gate uye cheki mavharuvhu ndiyo sarudzo dzakakurumbira pane iyi mhando yebasa. Mavhavha akajairwa mune ino sevhisi anovakwa zvinoenderana neAWWA zvirevo.
Mazhinji emagetsi emagetsi anogadzirwa muUnited States anogadzirwa mumhepo yemhepo uchishandisa fossil-peturu uye emhando yepamusoro-turbine. Kudzorera kumashure chifukidziro chemuchina wemagetsi wemazuva ano kwaizopa maonero ekumanikidza-epamusoro, epamusoro-tembiricha pombi masystem. Iyi mitsara mikuru ndiyo inonyanya kukosha mukugadzirisa simba remhepo.
Gedhi mavharuvhu inoramba iri sarudzo hombe yesimba remagetsi pa / off mashandisirwo, kunyangwe yakakosha chinangwa, Y-pateni globe mavharuvhu anowanikwa zvakare. Kumusoro- kuita, kwakakosha-sevhisi mabhora mavharuvhu ari kuwana mukurumbira nevamwe vagadziri vezvigadzirwa zvemagetsi uye vari kupinda munyika ino yaimbove-yakazara-vharuvhu-inotongwa pasirese.
Metallurgy yakakosha kune mavhavha mushandiswo emagetsi, kunyanya iwo anoshanda munzvimbo dzepamusoro kana dzepamusoro-soro dzekumanikidza uye tembiricha. F91, F92, C12A, pamwe neInconel yakati wandei nesimbi isina simbi-masimbi anowanzo shandiswa muzvirimwa zvemagetsi zvemazuva ano. Dzvinyiriro makirasi anosanganisira 1500, 2500 uye mune dzimwe nguva 4500. Iyo modulating mamaki epamusoro emagetsi emagetsi (ayo anoshanda chete sekudikanwa) anoisawo kumanikidza kukuru pamavhavha nepombi, zvinoda magadzirirwo akasimba kubata mubatanidzwa wakanyanya wekuchovha bhasikoro, tembiricha kumanikidza.
Pamusoro peiyo huru yekuvhara mhepo, zvirimwa zvemagetsi zvinotakurwa nemapayipi anobatsira, akazara nemazana esuwo, girobhu, cheki, shavishavi nemavharuvhu ebhora.
Magetsi enyukireya anoshanda pane imwecheteyo steam / yakakwira-inomhanya turbine musimboti. Musiyano wekutanga ndewekuti munzvimbo yemagetsi yenyukireya, iyo steam inogadzirwa nekupisa kubva pane fission maitiro. Nyukireya emagetsi emagetsi mavhavhari akafanana nehama yavo yakasarudzika-kushumwa, kunze kwevazukuru vavo uye chinodikanwa chakawedzerwa chekuvimbika kwakazara. Nyukiliya mavharuvhu anogadzirwa kune akakwirisa zviyero, aine anokodzera uye kuongorora zvinyorwa zvichizadza mazana emapeji.
MAFUTA NEGASI KUKWANISA
Oiri uye gasi matsime uye ekugadzira zvivakwa vanorema vashandisi vevhavha, kusanganisira akawanda anorema-basa mavharuvhu. Kunyangwe gusher yemafuta ichitsveta mazana emamita mumhepo isingachakwanise kuitika, mufananidzo uyu unoratidza kudzvinyirira kunogona kuitika kwemafuta epasi nepasi. Ichi ndicho chikonzero misoro kana miti yeKisimusi inoiswa kumusoro kwetambo tambo refu yepombi. Aya magungano, pamwe nemubatanidzwa wavo wemavhavha uye akakosha fittings, akagadzirirwa kubata kumanikidza kumusoro kwe10,000 psi. Kunyangwe isingawanzo kuwanikwa pamatsime akacherwa pasi mazuva ano, kumanikidza kwakanyanya kwakanyanya kunowanzo kuwanikwa pamatsime akadzika ekumahombekombe.
Wellhead michina dhizaini yakafukidzwa neAPI yakatarwa senge 6A, Tsananguro yeWellhead uye Kisimusi Muti Midziyo. Mavharuvhu akafukidzwa mu6A akagadzirirwa kumanikidza kwakanyanya asi tembiricha ine mwero. Miti mizhinji yeKisimusi ine mavhavha egedhi uye mavhavhosi akakosha eglobe anonzi anozarirwa. Izvo zvinokachidzwa zvinoshandiswa kugadzirisa kuyerera kubva kutsime.
Kuwedzera kumatsime ivo pachavo, zvivakwa zvakawanda zvinowedzera zvine mafuta kana gasi munda. Maitiro ekugadzirisa zvigadzirwa kuti utange kurapwa mafuta kana gasi zvinoda mavhavha akati wandei. Aya mavhavha anowanzo kabhoni simbi yakatemerwa makirasi epasi.
Dzimwe nguva, mvura inoora zvikuru — hydrogen sulfide — inowanikwa murukova rwepetroleum mbishi. Ichi chinyorwa, chinonziwo gasi rinovava, chinogona kuuraya. Kukunda matambudziko egasi rinovava, zvakakosha zvinhu kana matekiniki ekugadzirisa zvinhu zvinoenderana neNACE International kududzirwa MR0175 inofanirwa kuteverwa.
Iwo mapaipi masisitimu emahombekombe emafuta ekumahombekombe uye zvivakwa zvekugadzira zvine huwandu hwemavharuvhu akavakirwa kune akawanda akasiyana magadzirirwo ekugadzirisa akasiyana siyana ekuyerera ekudzora matambudziko. Izvi zvivakwa zvakare zvine akasiyana siyana masisitimu ehurongwa uye zvishandiso zvekumanikidza.
Kune zvivakwa zvekugadzira oiri, iyo arterial moyo ndiyo chaiyo mafuta kana gasi kupora pombi system. Kunyangwe zvisiri nguva dzose papuratifomu pachayo, mazhinji masisitimu ekugadzira anoshandisa miti yeKisimusi uye mapombi anoshanda munzvimbo dzakadzika dzisingaite dzemamita zviuru gumi kana kudarika. Ichi chishandiso chekugadzira chakavakirwa kune vazhinji vanoremedza American Petroleum Institute (API) zviyero uye zvinotsanangurwa mune akati wandei API Anokurudzirwa Maitiro (RPs).
Pamapuratifomu mazhinji emafuta, mamwe maitiro anoiswa kune yakasvibira fluid inouya kubva kutsime musoro. Izvi zvinosanganisira kupatsanura mvura kubva kumahydrocarbon uye kupatsanura gasi uye gasi chaiwo zvinwiwa kubva murukova rwemvura. Iyi post-yeKisimusi yemiti yekupomba masisitimu inowanzo kuvakwa kuAmerican Society yeMechanical Injiniya B31.3 mapaipi emakodhi nemavhavha akagadzirwa zvinoenderana neAPI vharuvhu yakatarwa senge API 594, API 600, API 602, API 608 uye API 609.
Mamwe eaya masisitimu anogona zvakare kuve neAPI 6D gedhi, bhora uye kutarisa mavharuvhu. Sezvo chero mapaipi papuratifomu kana boora ngarava iri mukati meiyo nzvimbo, izvo zvakanyanya zvinodiwa kushandisa API 6D mavhavha emapombi haashande. Kunyangwe akawanda mavhavha emhando achishandiswa mune aya mapaipi masisitimu, vharuvhu mhando yesarudzo ivharu bhora.
Kunyangwe mapaipi mazhinji akavanzwa kubva pakuonekwa, kuvapo kwawo kunowanzoonekwa. Zvikwangwani zvidiki zvinoratidza "peturu peturu" ndeimwe chiratidzo chiri pachena chekuvapo kwepasi pekutakura pombi. Mapaipi aya akashongedzerwa nemavharuvhu akakosha mazhinji pahurefu hwayo. Emergency pombi shutoff mavharuvhu anowanikwa panguva dzakatarwa nematanho, makodhi nemitemo. Aya mavhavha anoshandira rakakosha sevhisi yekuparadzanisa chikamu chepombi kana paine inodonha kana panodiwa kugadzirisa.
Zvakare zvakapararira munzira yemapaipi zvivakwa panowanikwa mutsetse kubva pasi uye mutsetse wekuwana uripo. Aya masitepisi ndiyo imba ye "nguruve" yekumisikidza michina, iyo inoumbwa nemidziyo yakaiswa mumapayipi kungave kuongorora kana kuchenesa tambo. Idzi nzvimbo dzekuvhura nguruve dzinowanzo kuve nemavheji akati wandei, ingave gedhi kana mhando dzebhora. Ose mavharuvhu pane pombi system anofanirwa kunge akazara-chiteshi (kuzara-kuzarura) kubvumidza kupfuura kwenguruve.
Mapaipi anodawo simba kurwisa kukanganiswa kwepombi uye kuchengetedza kumanikidza nekuyerera kwetambo. Compressor kana pombi zviteshi zvinoita kunge zvidiki diki zveyakagadziriswa chirimwa pasina shongwe refu dzekuparadza dzinoshandiswa. Aya mairesi ari kumba kune akawanda masuo, bhora uye kutarisa mapaipi mavharuvhu.
Iwo mapaipi pachawo akagadzirwa zvinoenderana nematanho akasiyana siyana uye makodhi, nepo mavharuvhu epombi achiteera API 6D Mapaipi Mapaipi.
Kune zvakare mapaipi madiki ayo anodyisa mudzimba uye zvivakwa zvebhizimusi. Iyi mitsara inopa mvura uye gasi uye inochengetedzwa nema shutoff mavharuvhu.
Masuwa makuru, kunyanya kuchamhembe kweUnited States, anopa huni yekudziya zvinodiwa nevatengi vekutengesa. Iyi mitsetse yekupa mweya ine akashongedzerwa nemhando dzakasiyana dzemavharuvhu kudzora uye kudzora kufema kwemhepo. Kunyangwe iyo mvura iri chiutsi, kumanikidza uye tembiricha zvakaderera pane izvo zvinowanikwa mune yemagetsi chirimwa chiutsi. Mhando dzakasiyana dzemavheji dzinoshandiswa mune ino sevhisi, kunyangwe iyo vheji inoremekedzwa yevhavha ichiri sarudzo inozivikanwa.
DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWANYA
Magetsi ekuchenesa account anoverengera mashandisirwo evharuvhu maindasitiri kupfuura chero chidimbu chevhavha. Refineries imba kune ese ari maviri anopisa mvura uye mune dzimwe nguva, kwakanyanya tembiricha.
Izvi zvinhu zvinoraira kuti mavhavha anovakwa sei zvinoenderana neAPI vharuvhu dhizaini dhizaini senge API 600 (mavhavha egedhi), API 608 (mavharuvhu ebhora) uye API 594 (tarisa mavharuvhu). Nekuda kwebasa rakaomarara rakasangana nevakawanda eaya mavharuvhu, mari yekuwedzera yekuora inowanzodiwa. Iyi mvumo inoratidzwa kuburikidza neakakura madziro makobvu ayo anotsanangurwa muAPI dhizaini magwaro.
Anenge ese makuru vharuvhu mhando anogona kuwanikwa muakawanda mune yakajairwa hombe yekuchenesa. Iyo pese pese gedhi vharuvhu ichiri mambo wegomo ine huwandu hwakakura hwevanhu, asi maquarter-mavharuvhu ekutora ari kuwedzera huwandu hukuru hwemugove wavo wemusika. Zvikamu zvequarter-turn zvinogadzira zvinobudirira kupinda mukati meiyi indasitiri (iyo yaimbove zvakare inotungamirwa nezvigadzirwa zvine mutsetse) inosanganisira yakakwira mashandiro matatu akakwenenzverwa mavharufuru mavharuvhu uye nesimbi yakagara mavharuvhu ebhora.
Hedhi gedhi, globe uye cheki mavharuvhu achiri kuwanikwa en-masse, uye nekuda kwemoyo wekugadzira kwavo uye hupfumi hwekugadzira, hauzonyangarika chero nguva munguva pfupi.
Pressure ratings yemafuta ekuchenesa anomhanyisa iyo gamut kubva Kirasi 150 kusvika Kirasi 1500, neClass 300 inonyanya kufarirwa.
Plain kabhoni simbi, senge giredhi WCB (yakakandwa) uye A-105 (yekugadzira) ndiyo inonyanya kufarirwa zvinhu zvakatsanangurwa uye zvinoshandiswa mumagetsi ekushambadzira sevhisi. Yakawanda yekunatsa maitiro ekushandisa inosundira iyo yepamusoro tembiricha miganho yeakajeka kabhoni steels, uye epamusoro-tembiricha maalloys anotsanangurwa kune izvi zvinoshandiswa. Inonyanya kufarirwa yeaya echrome / moly steels senge 1-1 / 4% Kr, 2-1 / 4% Kr, 5% Kr uye 9% Kr. Stainless simbi uye epamusoro-nickel alloys anoshandiswawo mune dzimwe dzakanyanya hasha yekuchenesa maitiro.
Iyo indasitiri yemakemikari mushandisi muhombe wemagetsi emhando dzese uye zvishandiso. Kubva kudiki batch zvirimwa kusvika kune yakakura petrochemical zvivakwa zvinowanika paGulf Coast, mavhavha chikamu chakakura chemakemikari maitiro ekupomba masystem.
Mazhinji mashandisirwo emakemikari maitiro akaderera mukumanikidza kupfuura mazhinji ekuchenesa maitiro uye kugadzira simba. Iwo anozivikanwa zvikuru makosi ekumanikidza emakemikari ekudyara mavharuvhu uye kupomba ndeMakirasi 150 ne300. Makemikari zvinomera ave zvakare ari mutyairi mukuru wemusika share takeover ayo mavharuvhu ebhora akarwa kubva kumahara mavharuvhu mukati memakore makumi mana apfuura. Iyo yakagadzika-yakagara vharuvhu yebhora, ine yayo zero-leakage shutoff, inokodzera zvakakwana kune akawanda makemikari emiti yekushandisa. Iyo compact saizi yevhavha yebhora chinhu chinozivikanwa zvakare.
Pachine zvimwe zvinomera zvemakemikari nemaitiro emiti panosarudzwa mavharuvhu akaenzana. Muzviitiko izvi, akakurumbira API 603-akagadzirwa mavharuvhu, aine matete masvingo uye akareruka masimbi, anowanzove ari gedhi kana globe vharafu yesarudzo. Kudzora kwemamwe makemikari kunoitwawo zvinobudirira ne diaphragm kana pinch mavharuvhu.
Nekuda kwehunhu hunoparadza hwemakemikari mazhinji uye maitiro ekugadzira makemikari, kusarudzwa kwezvinhu kwakakosha. Iyo defacto zvinhu ndeye 316 / 316L giredhi yesaustenitic simbi isina simbi. Chinyorwa ichi chinoshanda nemazvo kurwisa ngura kubva kune yakawanda dzimwe nguva yakashata yemvura.
Kune mamwe maitiro akasimba anokonzera, kudzivirirwa kwakawanda kunodiwa. Zvimwe zvepamusoro-magiredhi mamaki easustenitic simbi isina simbi, akadai 317, 347 uye 321 anowanzo sarudzwa mune aya mamiriro. Mamwe maalloys anoshandiswa nguva nenguva kudzora zvinwiwa zvemakemikari anosanganisira Monel, Alloy 20, Inconel uye 17-4 PH.
LNG UYE GASI KUPARADZANA
Ose emvura gasi echisikigo (LNG) uye maitiro anodikanwa ekuparadzanisa gasi anovimba nepombi yakakura. Aya maficha anoda mavhavha anokwanisa kushanda pakadzika kwazvo cryogenic tembiricha. Iyo indasitiri yeLNG, iri kukura nekukurumidza muUnited States, iri kuramba ichitsvaga kusimudzira nekuvandudza maitiro egesi liquefaction. Kusvikira izvi, kupomba uye mavhavha ave akakurisa uye zvinodzvinyirira zvasimudzwa.
Aya mamiriro akada kuti vagadziri vevharuvhu vagadzire dhizaini yekusangana nematanho akaomarara. Quarter-turn bhora nemavharufuru mavharuvhu anozivikanwa paLNG sevhisi, iine 316ss [simbi isina chinhu] chinhu chinozivikanwa kwazvo. ANSI Kirasi 600 ndiyo yakajairwa kumanikidza siringi kune akawanda maLNG mafomu. Kunyangwe zvigadzirwa zvequarter-turn zviri izvo zvinozivikanwa mhando dzevharuvhu, gedhi, globe uye cheki mavharuvhu anogona kuwanikwa muzvirimwa zvakare.
Basa rekuparadzanisa gasi rinosanganisira kupatsanura gasi muzvinhu zvaro zvakakosha. Semuenzaniso, nzira dzekuparadzanisa mweya dzinopa nitrogen, okisijeni, helium uye mamwe marasi magasi. Iyo yakaderera-tembiricha hunhu hweichi chiitiko zvinoreva kuti akawanda cryogenic mavharuvhu anodikanwa.
Zvese zviri zviviri LNG uye gasi rekuparadzanisa zvinomera zvine yakadzika-tembiricha mavhavha ayo anofanirwa kuramba achishanda mune aya cryogenic mamiriro. Izvi zvinoreva kuti vharuvhu inorongedza sisitimu inofanirwa kukwidziridzwa kubva kune yakaderera-tembiricha fluid kuburikidza nekushandisa gasi kana condensing ikholamu. Chikamu chegesi ichi chinodzivirira chinoyerera kubva pakuumba bhora rechando kutenderedza nzvimbo yekurongedza, izvo zvaizodzivirira pombi yevhavha kubva pakutendeuka kana kusimuka.
Zvivakwa zvekutengesa zvinotikomberedza asi kunze kwekunge tanyatso tarisisa sezvazvinovakwa, hatina ruzivo rwekuwanda kwemanyoro emvura akavanzwa mukati memadziro avo emabwe, girazi nesimbi.
Chinhu chinowanzoitika muzvivakwa zvese imvura. Zvese izvi zvivakwa zvine akasiyana mapaipi masystem anotakura akawanda musanganiswa weiyo hydrogen / oksijeni komputa muchimiro chemvura inonwa, mvura yakasviba, mvura inopisa, grey mvura uye moto kudzivirira.
Kubva pakuona kwekupona kwechivakwa, masystem emoto anonyanya kukosha. Kuchengetedzwa kwemoto muzvivakwa kunopihwa kwese kwese uye kuzadzwa nemvura yakachena. Kuti masystem emvura emoto abudirire, anofanirwa kuve akavimbika, kuve nekumanikidza kwakaringana uye kuve ari nyore mukati mechimiro chose. Aya masisitimu akagadzirirwa kuti asimbise simba mune moto.
Zvivakwa zvepamusoro-soro zvinoda sevhisi yekumanikidza mvura pamusoro penzvimbo dzepasi sepasi pezasi saka pombi dzakamanikidza zvakanyanya nekupomba zvinofanirwa kushandiswa kukwirisa mvura kumusoro. Masystem epombi anowanzo kuve Kirasi 300 kana 600, zvinoenderana nekureba kwekuvaka. Mhando dzese dzevhavha dzinoshandiswa mune izvi zvinoshandiswa; zvisinei, magadzirirwo evharuvhu anofanirwa kubvumidzwa ne Underwriters Laboratories kana Factory Mutual kuitira moto moto.
Iwo mamwe makirasi uye mhando dzevhavha dzinoshandiswa pamoto masevhisi evasevhisi anoshandiswa mukugovana mvura yekunwa, kunyangwe iyo nzira yekutendera isiri yakaoma.
Mabhizimusi emhepo ekugadzirisa mamiriro ekunze anowanikwa muzvivakwa zvikuru zvebhizinesi senge zvivakwa zvehofisi, mahotera nezvipatara zvinowanzo kuve zvepakati. Ivo vane hombe chiller unit kana bhaira kutonhora kana kupisa mvura inoshandiswa kuendesa inotonhora kana yakanyanya tembiricha. Aya masisitimu kazhinji anofanirwa kubata mafiriji akadai seR-134a, hydro-fluorocarbon, kana mune mamiriro makuru ekupisa masisitimu, steam. Nekuda kweiyo compact saizi yefurufuru uye mavharuvhu ebhora, aya marudzi akave anozivikanwa muHVAC chiller masisitimu.
Padivi remhepo, mamwe mavhavha-echina-mavharuvhu apinda mukushandisa, zvakadaro mainjiniya epombi dzemvura vachiri kuvimba negedhi rakaenzana uye mavharuvhu epasi, kunyanya kana pombi ichida magaro-esimbi anopera. Kune izvi zvine mwero sisitimu yekushandisa, simbi yatora nzvimbo yesimbi yakakonzerwa nekuda kwesimbi yemagetsi.
Dzimwe sisitimu dzinodziya dzinoshandisa mvura inopisa pachinzvimbo chemhepo senge yekufambisa mvura. Aya masisitimu anoshandirwa mushe nemhangura kana mavhavha esimbi. Quarter-shanduka yakatsiga-yakagara bhora uye mavharuvhu mavharuvhu anozivikanwa kwazvo, kunyangwe mamwe marongero emitsara achiri kushandiswa.
Kunyangwe hazvo humbowo hwekushandisa kwevhavha hwakataurwa mune ino chinyorwa hungave husingaonekwe parwendo rwekuenda kuStarbucks kana kuimba yaambuya, mamwe mavhavha akakosha anogara ari padhuze. Kune mamwe mavharuvhu muinjini yemota anoshandiswa kusvika kunzvimbo idzodzo senge dziri mucarburetor dzinodzora kuyerera kwemafuta muinjini uye idzo dziri muinjini dzinodzora kuyerera kwepeturu kupinda mumapiston nekubuda zvakare. Uye kana aya mavharuvhu asina kuswedera padhuze nehupenyu hwedu hwezuva nezuva, funga chokwadi ichocho icho moyo yedu inorova nguva dzose kuburikidza neina akakosha kuyerera ekudzora zvishandiso.
Uyu unongova mumwe muenzaniso wezvazviri izvo: mavhavha ari kwese kwese. VM
Chikamu chechipiri chechinyorwa chino chinofukidza mamwe maindasitiri panoshandiswa mavhavha. Enda ku www.valvemagazine.com kuti uverenge nezve pulp & bepa, zvekushandisa mugungwa, madhamu uye simba remagetsi remvura, zuva, simbi nesimbi, eerospace, geothermal, uye yekugadzira doro uye kudhizaira.
GREG JOHNSON ndiye mutungamiri weUnited Valve (www.unitedvalve.com) muHouston. Iye ari mupepeti ari kupa kuVALVE Magazine, sachigaro wekare weValve Repair Council uye iye zvino nhengo yebhodhi yeVRC. Anoshandawo kuVMA's Dzidzo & Kudzidzisa Komiti, mutevedzeri wasachigaro weVMA's Komiti Yezvekutaurirana uye akapfuura mutungamiri weVagadziri Standardization Society.
Post nguva: Sep-29-2020
Mvura Inopa System
Kero:Hengjie Town, Haishu Dunhu, Ningbo Zhejiang, China